Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba zaseJamaica » I-Jamaica Manje Iphokophele Abavakashi Be-Cruise Abayi-3 Million ngo-2025
Izindaba Ezintsha • I-Caribbean • Ukuhamba ngesikebhe • Izindaba zikaHulumeni • Industry Hospitality Industry • Izindaba zaseJamaica • Izindaba • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
IJamaica cruise Tourism
Phambilini namuhla, wenze lesi simemezelo ngesikhathi se-Jamaica Vacations Limited (JAMVAC) Executive Management and Board Retreat, ebiseRoyalton Blue Waters eTrelawny.
“Inhloso yethu wukuqinisekisa lokho Jamaica ithola abagibeli bezikebhe abangu-3 million ngo-2025. Sesakhe ingqalasizinda, futhi sizokwenza omunye umsebenzi ezimakethe ukuze sifeze le nhloso ebalulekile,” kusho u-Bartlett.
“Amandla i-Jamaica Tourist Board kanye ne-JAMVAC ezizowafaka emakethe kuzoba ukubeka iJamaica, hhayi njengendawo yokuzikhethela yaseCaribbean, kodwa indawo ekhangayo ikakhulukazi kubantu baseYurophu, kanye nase-Asia kanye eMpumalanga Ephakathi,” enezela.
U-Bartlett waphawula ukuthi i-JAMVAC izoqhubeka nokusebenzisana eduze ne-Port Authority yase-Jamaica, i-Jamaica Tourist Board (JTB), kanye ne-Tourism Product Development Company (TPDCo) ukuze kuzuzwe lo mgomo.
Izindaba ezamukelekile ziza phakathi kwemibiko ethi i-cruise sub-sector, ephinde yavulwa ngo-Agasti, ilokhu ikhula kancane. I-Planning Institute of Jamaica (PIOJ) ibike ukuthi abagibeli abahamba ngomkhumbi bafinyelele ku-8,379 besuka emikhunjini emi-5 ezinyangeni zika-Agasti noSepthemba, uma kuqhathaniswa noyedwa phakathi nesikhathi esihambisanayo sika-2020. I-PIOJ iphinde yaveza ukuthi Inani Langempela Lengezwe embonini Yamahhotela Nezindawo Zokudlela. ilinganiselwa ukuthi ikhule ngo-114.7% esikhathini sikaJulayi kuya kuSepthemba ka-2021, uma siqhathaniswa nesikhathi esifanayo sika-2020. Ukufika kwezivakashi ezima ngezinyanga zikaJulayi no-August 2021 kukhuphuke ngo-293.3%, ngesikhathi esifanayo ngo-2020.
I-JAMVAC iyinhlangano yomphakathi yoMnyango Wezokuvakasha futhi yasungulwa ngo-1978. Yengamela izikhundla zoMnyango zokuthutha ngezindiza kanye nezokuvakasha. Igunya layo ukudala izimo zokuthi izinombolo zezivakashi zase-Jamaica zikhule ngesivinini esisheshayo. Iphinde ihlose ukuhlinzeka, ukuvikela, kanye nokwandisa umthamo wendiza kuyo yomibili imizila ehleliwe kanye neqashiwe ngokusebenzisana nezinkampani ezintsha ezikhona nezingase zibe khona ukuze kuqinisekiswe umthamo owanele emzileni ngamunye. Ngaphezu kwalokho, imaketha ngokuqondile kuma-agent, icela izingcingo eziya emachwebeni ase-Jamaican ukusuka olayini bohambo lwesikebhe, futhi iqinisekisa ukuthi ulwazi lwabagibeli lwasolwandle luhlala lungcono kakhulu.
I-JAMVAC ibuswa Ibhodi Labaqondisi, usihlalo walo u-Bertram Wright, futhi uJoy Roberts unguMqondisi Ophethe njengamanje.